Izindaba - Izici nokusetshenziswa kwamaphrofayili we-aluminium yezimboni
1. Kunezincazelo nobukhulu obuhlukahlukene, nosayizi wohlangothi olude nohlangothi olufushane ukuphindaphindeka. Isibonelo, i-4040 yethu ejwayelekile, i-4080, i-40120, i-4040 iyisikwele, zonke izinhlangothi ezine zingama-40mm, kanti i-4080 uhlangothi olude olungu-80mm. Uhlangothi olufushane ngu-40mm, kanti uhlangothi olude luphindwe kabili uhlangothi olufushane. Vele kukhona futhi okukhethekile, okufana no-4060, uhlangothi olude luphindwe ka-1.5 uhlangothi olufushane.
2. Zimbili kuphela ububanzi be-slot, i-8mm ne-10mm. Yize kunamakhulu wokucaciswa kwamaphrofayli we-aluminium wezimboni, ama-slots awo empeleni lawa angosayizi ababili, ikakhulukazi abancane, ngokwesibonelo, i-2020 slot ingu-6mm. Lokhu ukusebenzisa izesekeli ezijwayelekile. Siyazi ukuthi amaphrofayili e-aluminium yezimboni ngokuvamile axhunywe ngamabhawodi namakhona wamantongomane, futhi lezi zesekeli zinokucaciswa okuvamile, ngakho-ke ukuhlangana kwezesekeli kufanele kubhekwe lapho kuklanywa amaphrofayili we-aluminium.
3. Kunezinhlobo ezimbili zezinga likazwelonke nelaseYurophu. Umehluko phakathi kwephrofayili ye-aluminium ejwayelekile yaseYurophu kanye nephrofayili ejwayelekile kazwelonke ye-aluminium iku notch. Izinga laseYurophu liyindawo yokudonsa enama-trapezoidal ngenhla enkulu nangaphezulu. Indawo kazwelonke ejwayelekile iyindawo enxande, efanayo neyaphezulu nangaphansi. Izixhumi ezisetshenziswe ezingeni likazwelonke kanye nelaseYurophu zihlukile. Ngokwami ​​ngicabanga ukuthi iphrofayli ejwayelekile yaseYurophu yezimboni ye-aluminium ingcono. Izinga laseYurophu linezincazelo eziningi kunezinga likazwelonke. Kukhona namanye amaphrofayili we-aluminium wezimboni angajwayelekile, angasetshenziswa nezixhumi ezijwayelekile zaseYurophu noma izixhumi ezijwayelekile zikazwelonke.
4. Ubukhulu bodonga lwamaphrofayli we-aluminium wezimboni ngeke abe mncane kakhulu. Ngokungafani namaphrofayili we-aluminium yezakhiwo, amaphrofayili we-aluminium wezimboni adlala kuphela indima yokuhlobisa, futhi ubukhulu bodonga buzoba mncane kakhulu. Amaphrofayili e-aluminium yezimboni ngokuvamile adlala indima esekelayo futhi adinga umthamo othwala umthwalo othize, ngakho-ke ukushuba kodonga akufanele kube mncane kakhulu.
Iphrofayili ye-aluminium yezimboni iyinto ene-alloy, enokusetshenziswa okuhlukahlukene futhi ethandwa kakhulu emakethe yamanje. Ngenxa yekhono layo lokufaka imibala, amakhemikhali nezakhiwo ezinhle, kancane kancane lingena esikhundleni sezinye izinto zensimbi futhi libe yinto esetshenziswa ezimbonini eziningi.
Ngokubanzi, amaphrofayili e-aluminium yezimboni amaphrofayili we-aluminium ngaphandle kweminyango namawindi, ikhethini lodonga i-aluminium, kanye namaphrofayili we-aluminium wokuhlobisa. Isibonelo, ezinye izinto zokuhamba ngezitimela, umzimba wezimoto, ukukhiqizwa kanye ne-aluminium ephilayo kungabizwa ngokuthi yiphrofayili ye-aluminium yezimboni. Ngomqondo omncane, iphrofayili ye-aluminium yezimboni yiphrofayili yomhlangano we-aluminium, okuyiphrofayili enqamulelayo eyenziwe ngezinduku ze-aluminium ezincibilikiswayo bese zifakwa kudayidi ukuze zikhishwe.
Lolu hlobo lwephrofayili lubizwa nangokuthi iphrofayili ye-aluminium extrusion, iphrofayili ye-aluminium alloy profile. Inokusetshenziswa okuhlukahlukene futhi ingasetshenziswa ezimbonini eziningi. Ukusetshenziswa okujwayelekile ukwenza amaracks wemishini eyahlukahlukene, izembozo zemishini yokuvikela, izesekeli ezinkulu zekholamu, amabhande wokuhambisa umugqa womhlangano, amafreyimu emishini yemaski, ama-dispensers namanye amathambo emishini. Nansi isingeniso esifushane sokusetshenziswa kwamaphrofayili we-aluminium yezimboni ngomqondo omncane, ngokulandelayo:
1. Uhlaka lwe-aluminium yezinsiza kusebenza, ifreyimu ye-aluminium
2. Amathambo omugqa webhentshi osebenza emhlanganweni, ukusekelwa komugqa wokuhambisa ibhande, ibhentshi lomsebenzi wokusebenzela
3. Ucingo locingo lokuphepha, ikhava enkulu yokuvikela imishini, isikrini esikhanyayo nesikrini se-arc-proof
4. Ipulatifomu enkulu yesondlo kanye nesitebhisi esikhuphukayo
5. Ubakaki wemishini yezokwelapha
6. Ubakaki wokufaka i-Photovoltaic
7. Ubakaki wesimulator yemoto
8. Amashalofu ahlukahlukene, ama-rack, ama-racks wezinto ezinkulu zasekamelweni
9. Inqola yokuthengisela impahla yokusebenzela, inqola yethuluzi lephrofayili ye-aluminium
10. Imibukiso emikhulu yokubonisa amarobhothi, amabhodi okubonisa imininingwane yeworkshop, amaraki ebhodi elimhlophe
11. Igumbi lelanga, ishede elihlanzekile
Ngaphezu kokusetshenziswa okuvamile okushiwo ngenhla, kungabuye kwenziwe kohlaka lwemikhiqizo ehlukahlukene. Ngokuvamile, ungayisebenzisa noma kunini lapho ufuna khona. Kumele kuqashelwe ukuthi kunezincazelo eziningi zamaphrofayili we-aluminium wezimboni, futhi ungakhetha izinto ngokuya ngezidingo zakho lapho ukhetha. Zonke zixhunywe nezesekeli zephrofayli ye-aluminium efanayo, ephephile futhi ezinzile, futhi okulula ukuyiqaqa.